Yiziphi izinzuzo zokubeka phansi phansi kwamamitha - Isazi seZD Floor
Ikhaya>Yiziphi izinzuzo zokubeka phansi phansi kwamamitha
Hlela: UDenny　2019-12-05
1. Uma kuqhathaniswa nokhuni oluqinile lwaphansi lokhuni, ubukhulu bukhulu.
2. Kunezinhlobo eziningi zemibala, ezingalingisa okusanhlamvu okwemvelo okwemvelo noma amaphethini wokufakelwa, amaphethini nemibala.
3. Umphumela jikelele womhlaba ngemuva kokubekwa ulungile.
4. Ngisho umbala kanye nomphumela omuhle wokubuka.
5. Uma kuqhathaniswa nokhuni oluqinile lokubekelwa phansi, indawo ephezulu inokumelana okuphakeme kwe-abrasion, ukubuyiswa komlilo okwedlulele, ukumelana okunamandla kokungcola nokugqwala, nokucindezela okuhle nokumelana nomthelela.
I-6, okulula ukuyihlanza, ukunakekela nokunakekela okulula.
7. Ukuqina okuhle okubunjiwe, ukuqeda ngokuphelele isakhiwo sokuqala sokhuni, ukubhubhisa izimfanelo ze-anisotropy, ukudumba nokuncipha, ngakho-ke kungaqinisekisa ukuthi igebe eliphakathi kwezigaba lincane ngesikhathi sokusebenzisa, futhi akulula ukulenza. Ifanele kakhulu amakamelo anezinhlelo zokufudumeza ezingaphansi komhlaba.
8. Ukufakwa okulula nokubekwa.
9, intengo ishibhile.
Yiziphi izinzuzo zokubeka phansi phansi kwamamitha Okuqukethwe okuhlobene